ချစ်ကြည်အေး: ယနေ့မှစ နှစ်တစ်ရာတိုင်...
မိုးယံ Mon May 30, 10:28:00 PM GMT+8
ခိုင်မာတဲ့ သံဓိပ်ထန်ဆိုတာ ဒါမျိုးကိုး...ဟီဟိ
မင်္ဂလာမောင်နှံသည် ယနေ့မှ စနှစ်တရာတိုင် ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစွာ ဘ၀ခရီးကို ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ။
Vista Mon May 30, 10:37:00 PM GMT+8
ကိုဇီးပြားတို့မင်္ဂလာမောင်နှံ ယနေ့မှ စနှစ်တရာတိုင် ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစွာ ဘ၀ခရီးကို အေးအတူပူအမျှ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ။ ( သူ့ ဘလော့ကမန့် မရလို့ )
မချစ်ကြည် စားခါနီး လင်ပန်းရှာတာမတွေ့ ဘူးလား စကောမရှာလို့ တော်သေး .. ဟိ။
Anonymous Mon May 30, 10:42:00 PM GMT+8
ညိမ်းနိုင် Mon May 30, 10:52:00 PM GMT+8
Anonymous Mon May 30, 11:26:00 PM GMT+8
မချစ်ပုံလည်းမပါဘူး... ထပ်တင်ပေးပါ.. မြင်ဖူးချင်တယ်... ထပ်တင်ပေးပါ...
သက်ဝေ Mon May 30, 11:29:00 PM GMT+8
အဲ... စချင် နောက်ချင်ဇောနဲ့ မင်္ဂလာမောင်နှံကို ဆုတောင်းပေးဖို့ မေ့သွားတယ်...
မင်္ဂလာ မောင်နှံနှစ်ဦး ရာသက်တိုင် ချစ်ခင်ကြင်နာစွာ လက်တွဲနိုင်ပါစေ...း)
Anonymous Tue May 31, 12:44:00 AM GMT+8
Anonymous Tue May 31, 12:49:00 AM GMT+8
Zephyr နဲ့ ရည်မွန် တို့ ဇနီးမောင်နံ. ပျော်ရွင်ကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာစွာ အတူယှဉ်တွဲ အမြဲနေနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်။
Anonymous Tue May 31, 12:52:00 AM GMT+8
30 May 11, 09:57 PM
CV: အမေး ~ မင်္ဂလာပွဲမှာ စုံတွဲတွေ ဘာလို့ တစ်ယောက်လက်ကို တစ်ယောက် ကိုင်လေ့ရှိကြသလဲ။ အဖြေ ~ ဒါက ထုံးတမ်းအစဉ်အလာ တစ်ခုပါပဲ။ လက်ဝှေ့သမားတွေ မသတ်ပုတ်ခင်မှာ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကြသလိုမျိုးပေါ့။
မအိမ်သူ Tue May 31, 01:08:00 AM GMT+8
မင်္ဂလာပွဲလေးက အားကျစရာလေး။ ကလေးကို ခဏဘေးဖယ်ထားပြီး ကိုအိမ်သားနဲ့ မအိမ်သူတို့ အဲဒီလို မင်္ဂလာပြန်ဆောင်ချင်သွားတယ် .. :P မင်္ဂလာမောင်နှံ အတူတွဲပြီး ရတုပေါင်းများစွာ နွဲနိုင်ပါစေကြောင်း ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။
နိုင်းနိုင်းစနေ Tue May 31, 01:46:00 AM GMT+8
Zephyrနဲ့ ရည်မွန်တို့ ဇနီးမောင်နှံ့ ပျော်ရွှင်ကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာစွာ အတူယှဉ်တွဲ အမြဲနေနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်။
Zephyrဆိုတဲ့ နာမည်တော့ မြင်ဖူးနေတာကြာပြီ.. စိမ်းလန်းစိုပြေ ဝင်ပေါက်က ဆိုင်းပုဒ်မှာလေ.. :P
အစ်မ မနော်ဟရီတော့ ချွေးမချောချောရပြီပေါ့..
ရွှေစင်ဦး Tue May 31, 08:14:00 AM GMT+8
မစားရပေမဲ့လည်း ထပ်တူ ဆုတောင်းပါတယ်ဗျာ ချစ်ကြည်အေး စားရလည်း ရွှေစင်ဦး စားရသလိုပါဘဲ နှိုတ်စက်ပ
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) Tue May 31, 09:14:00 AM GMT+8
မင်္ဂလာမောင်နှံတို့ သက်ထက်ဆုံး ချစ်ခင်ကြင်နာစွာ ပေါင်းသင်းနိုင်ကြပါစေ
အစားအသောက်တွေလည်း မစားရ ၀ခမန်း သွားရေ ကျသွားပါတယ်...
အစ်မချစ်က ကျွန်မတို့အတွက်ပါ ပိုစားလာတယ် ထင်တယ်း)
ပန်းချီ Tue May 31, 09:46:00 AM GMT+8
ဒီအစ်ကိုကြီးမြင်ဖူးပါတယ် မှတ်တယ်.. မြင်ဖူးတာကိုးလေး...း))
မင်္ဂလာဇနီးမောင်နှံ အသစ်စက်စက်ကလေး ရာသက်ပန် ရိုးမြေကြပေါင်းသင်းနိုင်ကြပါစေရှင်..။
ဟုတ်တယ် အစ်မချစ်ကြည် တစ်ပန်းကန်တည်းစားတာ ရုံဘူးးးးး။းP
ပန်းချီ Tue May 31, 09:51:00 AM GMT+8
ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်.. မမချစ် ပုံမြင်ဖူးချင်လို့ တင်ပါဗျို့...။ မမသက်ဝေရဲ့ တောင်းဆိုချက်ကို အပြတ်အသတ်ထောက်ခံပါတယ် :P
Anonymous Tue May 31, 10:32:00 AM GMT+8
နေ၀ဿန် Tue May 31, 12:27:00 PM GMT+8
တစ်ဘ၀လုံး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ပေါင်းသင်းနိုင်ကြပါစေဗျာ.... စားစရာတွေကြည့်ရင်း ဂလုသွားပါတယ်..း)
Anonymous Tue May 31, 08:11:00 PM GMT+8
အီလိုက်တာကွယ်...။ ဒီလင်ဒီမယား အိုအောင်ပေါင်းနိုင်စေ...!
Kay Wed Jun 01, 03:09:00 PM GMT+8
ဇက် ဆီ မှာ နှုတ်ဆက် မရ လို့.. မင်္ဂလာအခမ်းအနားမှူး မချစ် ဆီမှာပဲ.. နှုတ်ဆက် ဆုချွေ သွားပါတယ်။ မမြင်ဖူး..မသိကြပေမဲ့.. ဘလော့ဂ် မောင်နှမ မိတ်ဆွေ ဇက် တယောက်..မုဒ် အသစ် ကလေး နဲ့..စာလှလှ လေး တွေ ဆက်ရေးနိုင်ပါစေ လို့..။
စလုံးက.. ဘလော့ဂါ မင်လာဆောင်တွေ မှန်သမျှ လိုက်လံ စားသောက်..( အဲ.. ချီးမြှင့် အားပေး တဲ့..) မမချစ် ကြီး တယောက်လည်း.. လှသထက်လှ. နုသထက်နု.. စားသထက် စားနိုင်ပါစေ သော်ဝ်..
ညီမလေး Thu Jun 02, 07:22:00 PM GMT+8
မင်္ဂလာဆောင်တဲ့သူကို ညီမလေးမသိပေမဲ့ ...ရိုးမြေကျ ချစ်ခင်ကြင်နာစွာ ပေါင်းသင်းနိူင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပါရစေနော် ...
တကယ့်အချစ် တကယ့်ဘဝဆိုတာ အဲ့ဒီအချိန်ကျမှ စတယ်လေ ... ပျော်ရွှင်အေးချမ်းတဲ့ သာယာတဲ့ဘဝလေးကစောင့်ကြိုနေပါစေ ..